Nagu saabsan - Shaoxing Suerte Textile Co., Ltd.
Shaoxing Suerte Textile Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2011 waxayna ku taalaa Shaoxing - xarunta ugu weyn ee ururinta iyo qeybinta dharka ee Aasiya. Waxaa naga go'an inaan horumarin joogto ah ku sameyno tayada, xakamaynta qiimaha iyo adeegga macaamiisha. Waxaan ku dadaalaynaa inaan noqono dhinaca hogaaminaya ee soo saarista wax soo saarka iyo hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda cusub.Waxaan nahay shirkad-qeybiye tollan oo xirfad ku leh Shiinaha, shirkadduna waxay leedahay xirmo buuxa oo ah qalabka wax soo saarka dharka la soo dhoofiyo iyo aqoon isweydaarsi madaxbanaan. In ka badan toban sano oo horumar isdaba joog ah iyo hal-abuurnimo ， Shaoxing Suerte waxay noqotay shirkad soo saarta dharka ugu horreysa magaalada Zhejiang. Waxaan sii wadeynaa soo saarida badeecooyin cusub badeecadaheena waxaa loo dhoofiyaa Yurub, America, South America iyo wadamada kale ee aduunka.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira boqolaal nooc oo badeecooyin ah. Shirkaddu waxay ku takhasustay noocyada kala duwan ee alaabada dharka lagu tolo: mid taxane ah oo hal dhinac ah waxaa ka mid ah: suufka spandex hal maaliyad, rayon (spandex) hal maaliyad, ITY, DTY, FDY, TR spandex hal maaliyad, TC spandex Hal maaliyad, CVC funaanad spandex funaanad xarrago leh, dun yar yar, mesh pique, iwm.
Taxanaha laba-geesoodka ah waxaa ka mid ah: dharka caafimaadka lakabka hawada, dharka Roma, dharka loo yaqaan 'ottoman', dharka indhaha shimbirta, waffle, jacquard Fabric iyo dhinacyada feeraha oo ay ka mid yihiin: 1 × 1 feeraha, 2 × 2 feeraha, feeraha Faransiiska, iwm. taxane: dhogor hal dhinac ah, dhogorta labada dhinac leh, maro terry, dhogorta caarada, dharka qudhaanjada, iwm., dhar shaqeynaya Waxay leedahay shaqooyinka qoyaanka qoyaanka, ka hortagga ololka, anti-static, anti-ultraviolet, anti-bacterial, IWM Waxa kale oo jira dheeh, jacquard, daabacaado, gubasho, dun dun leh iyo habab kale. Shirkaddu waxay leedahay xuquuq soo dejin iyo dhoofineed oo u gaar ah, waxsoosaarkeeda waxaa loo dhoofiyaa Bariga Dhexe, Yurub, Koonfurta Ameerika, Mareykanka, iyo waddamo iyo gobollo kale. Kadib sanado badan oo tababar iyo soo koobid ah, shirkadu waxay sameysay nidaam dhameystiran oo howl gal ah waxayna leedahay koox howgal ganacsi ganacsi soo dejin iyo dhoofineed leh. Iyada oo ku saleysan caqiidada ganacsiga ee "marka hore macaamilka, marka hore sumcadda", shirkadda ayaa hadda saldhig adag ka sameysatay Shaoxing waxayna ilaalisay isbeddellada iibka sannadlaha ah.
Fikradda Muhiimka ah: Suerte-art Dharka ayaa sii wanaajinaya
Hadafkeenna: "Abuur maal wadajir, bulsho wax wada taraysa"
Macaamiil marka hore: Macaamiil baa u baahan marka hore
Sumcad marka hore: Sumcadda ayaa had iyo jeer ahayd qiyamka aasaasiga ah ee shirkadda
Dabeecadda: Astaamaha asaasiga ahi waa in qofku yeesho dabeecad wanaagsan.
Fulinta: fulintu waa muuqaalka ugu muhiimsan ee Suerte.
Fikirka: Toddobaad walba iibku wuu tirin doonaa shaqada usbuucan oo wuxuu sameyn doonaa horumar.
Waxay leedahay afar goobood oo Alibaba ah. Waan sii soconeynaa
Waxay leedahay seddex madal oo Alibaba ah
Waxaa la furay barxadii labaad ee Alibaba
Waxaa la daahfuray barxadii ugu horreysay ee Alibaba
Iibsigii sanadlaha ahaa wuxuu gaadhay in kabadan 20 milyan oo doolarka maraykanka ah, isaga oo sedexda ugu sareeya ka galay Degmada Jinghu iibka sadex sano oo isku xigta
Aasaasida warshad dhar madaxbanaan
hannaan gaar ah, qaabeynta qaabeynta, adeegga goynta
Khibrad hodan ah oo ku saabsan adeegyada OEM iyo ODM.
Cilmi baarista iyo horumarka
soo saar alaabo cusub waqtigeeda sida ku cad suuqa
100% kormeerka maaddada, hubi in qaabka macaamilku sax yahay, oo hubi inay jiraan alaab cilladaysan.
dhibaatadu waxay lahaan doontaa jawaab waqtigeeda ku habboon
Waxaa naga go'an inaan horumarin joogto ah ku sameyno tayada, xakamaynta qiimaha iyo adeegga macaamiisha. Waxaan ku dadaalaynaa inaan noqono dhinaca ugu sarreeya ee horumarinta wax soo saarka iyo hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda cusub. Warshad Iskudhafan Iyo Qalab Casri ahBilow ahaan sidii qol yar oo qoysku leeyahay oo iibiya, Shaoxing Mulinsen Imp & Exp Co.Ltd. ayaa loo soo saaray inay noqoto shirkad dharka ka samaysa isku xidhka ganacsiga, tolida, daabacaadda iyo dheeh. Warshadu waxay leedahay baaxad dhan 80 wareeg oo tol ah oo leh qalab cusub oo ka yimid Switzerland, 3 khadadka daabacaadda iyo 3 khadadka midabaynta. Awoodayada billaha ah waxay gaartey 10,000,000 oo mitir oo ah dhar dhammeystiran. Qalabyada horumarsan iyo teknoolojiyada la hagaajiyay ayaa noo suura geliyay inaan bixinno qiime iyo alaab tayo leh.
Waxaan ilaalinaa xarumahayada cilmi baarista iyo horumarinta iyo waliba koox hawleed dhar QC ah. Heerarka kormeerka ee xeeladeysan iyo xakamaynta adag ee geeddi-socodka marxalad kasta oo wax-soo-saar ayaa hubinaya tayada wax soo saarka. Dhoofintayadu waxay sare u kacday 50,000,000 oo doolar sanadkii 2012. 95% dakhligeenu wuxuu ka yimaadaa suuqyada dibada sida South Africa, South America, Middle East, Southeast Asia and etc. Cilmi baaris & Horumar Kooxdayada R&D ee sida gaarka ah ugu takhasustay waxay si joogto ah u soo saaraan qalab iyo teknoolojiyad cusub. Waxaan ku takhasusay noocyo kala duwan oo dhar ah sida hoosta: Dharka Taranka: Poly FDY, Poly DTY, Poly Spun, T / R, Viscose, Angora, Velvet, Jacquard poly fabric, Digital Print fabricWoven Fabric: Cotton: Poplin, Sateen, Voile, Twill , Shiraac; Rayon: Bannaan, labalaab; Polyester: Wach peach, Satin, Chiffon, Chiffon Yoryu, Pebble Georgette, koshibo, T / C Design Awoodaha Shaoxing Mulinsen Imp & Exp Co., Ltd waxay kuugu deeqayaan inaad ku dhameystirto awooda naqshadeynta guriga. Waxaa jira tobanaan kun oo naqshadaha moodada ugu badan leh oo la heli karo oo naqshado habaysan ayaa la soo dhaweynayaa. Iyada oo ay wataan Kooxda Farsamada Dharka Farsamada inay kula shaqeeyaan, waxaan ku faaneynaa cilaaqaadkeena.
Adeeg Xirfad Leh Waxaan kula talinaa macaamiisheenna qaab ku habboon baahiyahooda suuqa iyadoo lagu saleynayo waaya-aragnimadeena iyo aqoonteenna. Intabadan xiriirka mudada dheer ee la aas aasay ilaa maantadan waxay u noqdeen guul weyn shirkadahaas. Bilaw inaad ka faa'iideysato khibradeena wixii hadda ka dambeeya. Waxaan aaminsanahay ganacsigeenna, waxaan aaminsanahay shaqaalaheena waxaanan aaminsanahay macaamiisheenna. Noqoshada shirkad gaar loo leeyahay waxay na siineysaa awood aan ugu dhaqaaqno oo aan si deg deg ah ula jaanqaadno isbeddelada xaaladaha suuqa. Tani waxay awood noo siineysaa inaan hal-abuurnimo sameyno oo aan si joogto ah suuqyada ugu soo qaadanno alaabooyin cusub macaamiisheenna. Waxaan u soo bandhigeynaa macaamiisheenna kaliya ma aha wax soo saar, laakiin waa fikrado cusub, xalal hal abuur leh iyo adeeg farsamo oo heer sare ah oo loogu talagalay geeddi-socodka hagaajinta iyo waxqabadka wax soo saarka. Ku soo dhowow booqashada oo nala bilow shirkad guuleysata.